कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालनबारे कस्तो छ मापदण्ड र तयारी ? कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालनबारे कस्तो छ मापदण्ड र तयारी ?
कक्षा १२ को परिक्षा सञ्चालनबारे कस्तो छ मापदण्ड र तयारी ?
काठमाडौं, कार्तिक १५ – चार लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने कक्षा १२ को आसन्न परीक्षा मर्यादित र कोरोनाबाट सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले परीक्षालाई सङ्क्रमणको हिसाबले पनि सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो ।